Nin dambiila ah oo 30 Sano qof waalan iska dhigayey si uu u badbaado - BBC News Somali
Nin dambiila ah oo 30 Sano qof waalan iska dhigayey si uu u badbaado
Image caption Vincent Gigante
Waxaa loogu yeedhaa 'aabbaha khiyaanada'. Wuxuu madax u ahaa koox maafiya oo aad u xooggan oo ka howlgasha New York.
Vincent Gigante, oo ahaa madaxa Maafiyada New York ka howlgasha ayaa wuxuu muddo 30 sana ah uu iska dhigayey qof waalan si uu xabsi uga badbaado.
Ninkan waxa in mudda ah ku raad joogay hay'adda dambi badhista Mareykanka ee FBI balse inta ay ku raad joogeen kuma aysan fakarin in ninka ay raadinayaan uu iska dhigi karo qof waalan si uu isku qariyo.
Gigante ninka loo maleeynayey iyo xogta booliska ay ka haysteen muuqaalkiisa oo si khaldan looga sheegay ayaa sii adkeysay in si fudud lagu soo qabto.
Image caption Dilaaga weyne ee Kenneth Bianchi waxaa ugu dambeyn lagu riday xukun dil ah
Qofka la raadinayo oo sida loo maleeynayey ama sawirka laga haystay aan noqon mid cusub. Daraasad 879 qof laga qayb geliyey ayaa tilmaameysa 17.5% dadka fal dambiyeedyada sameeyey ee lagu raadjoogay iney noqdeen sawirkii laga haystay si aan ahayn iyaga oo qaarkood marki ugu dambeynti la qabtay halka xabsi loo diri lahaa isbitaal loo diray xaaladdooda caafimaad awgood."
Balse dadkaasi ma wada ahayn kuwa si dhan ah u xanuunsan ama maskaxda wax uga qaba.
James Lindsay, nin la odhan jiray oo loo haystay dilka Emma Thomson oo 15 jir ah, ayaa wuxuu ku dooday iney ruuxaan haysay ruuxaantiisana ay ku amartay inuu dilo gabar 15 jir ah oo tima cas.
65 sano ka dib ayay is heleen oo is guursadeen:
Burcad hore : Tiro malahan dadka aan tooriyeeyay
Maxkamadda waxay qorshaha ninkan fahantay marki ay heshay warqad uu saxibbadii u diray xilli uu xukunka maxkamadda Sugayey waxaana warqadda ku qorneyd farriintan: "waxaan dajistay qorshe macquul ah oo la iigu diro Isbitaal si siddeed sana kaddib la ii sii daayo."
Haddii dilka dartii xukun la iigu rido waxaan noolasheyda inta ka dhiman ku dhameysanayaa xabsi ayuu yiri. Ugu dambeyntina Lindsay waxaa lagu helay inuu dilka geystay waxaana loo diray xabsi daa'in.
Haddaba dadkan dambiyada gala waxay isku dayaan iney wax khaldaan "iyaga oo marar badan iska dhigayo iney yihiin dad dhimirka wax ka qaba si xukunka ay uga badbaadaan amaba looga soo gaabiyo."
Waxaynu arkeynaa nin lagu soo eedeeyey isku day kufsi waxaa laga haya caddeeyn cod isaga oo leh "dhaqaaq oo xadgudub jinsi samee (wax kufso) iyo nin tuug ah oo laga duubay cod caddeyn u ah oo 'wax jabsanaya' haddana isku dayaya waxaasoo dhan inuu iska qariyo inuu kufsi geystay isaga oo siyaaba kala duwn adeegsanaya.
Waxaa sida oo kale ay dhakhaatiirtu ka warramayaan iney la kulmaan dad isku abuuro waalli been ah oo dhakhaatiirta laftooda khalda.
"Dadka waallida beenta ama iska yeelyeelka ah isku rida ee dhakhaatiirta laftooda khalda waxaa si fudud looga ogaan karaa calaamadha lagu garto qofka si dhab ah u xanuunsan su'aalo uu ka jawaabi karin markay ka jawaabaan" ayey dhakhaatiirtu leeyihiin.
Ninki walaakeey dilay ayaan 37 sano ka dib Facebook ka helay
Haddana dhakhaatiirtu ma inkirin iney mararka qaar khubarada cilmu-nafsiga ay imtixaan ku noqdaan dadka waallida beenta ah isku abuura.
Balse dabagal, baaritaanno iyo su'aalo dhinacyo badan looga yimaaddo oo qofka la weydiiya ayaa lagu kala saari karaa bukaanka sida dhabta ah u xanuunsan iyo kan iska yeelyeelaya.
Image caption Andrea Yates waxay sheegtay inuu sheydaan ku kallifay iney ilmaheeda disho
Haddaba si loo hubiyo qofka xanuunka dhimirka uu sheeganayo inuu sax yahay tillaabbooyinka la qaado oo gacan ka geysanaya waxaa ka mid ah tijaabooyin cilmu-nafsi oo kala duwan.
Tijaabooyinkaasi waxaa ka mid ah: xusuusta qofka iyo sida uu wax u kala garanaya imtixaan ku saabsan in laga qaado haddiise tijaabada si khaldan loo sameeyo waxaa dhici karta in guul darra lala kulmo.
Su'alaha qofka tijaabada laga qaadayo la weydiiyo waxaa dhici karto inuu uga jawabo si xaaladdaba uga sii darta ama inuu qofka diido inuu baaritaankaba garab uu kuugu siiyo.
Image caption Baaritaanka maskaxda qofka lagu sameeyana waa lagu ogaan karaa cafimaad qabka qofka
Qofka baaritaanka lagu sameeynaya qalabka ugu wanaagsan ee ay dhakhaatiirta u isticmaali karaan waxay dhakhaatiirta ku sheegeen inuu yahay mashiinta maskaxda baaraysa, wuxuuna qalabkaasi awood uu u leeyahay inuu soo saaro qofka maskaxdiisu iney caafimaad qabto iyo inkale.
Haddaba, garsoorayaasha dacwadda kiiska Vincent Gange qaadayey waxay xabsi ku xukumeen 1997-kii.
Gigante ayaa lagu tilmaamay inuu yahay hadhka qofnimadiisi hore waxaana ugu dambeyn ninka odayga ah lagu xukumay laguna fuliyey xukunki ay maxkamadda ku ridday inkasta oo inkabadan 30 sano uu indhaha sharcigu qaban waayey oo uu ahaa qof dhimirka wax ka qabo oo ka duwan qofka la raadinaya.
Nin saacado gudahood dil kaga badbaaday
Ugu dambeyn, Vincent Gigante wuxuu geeriyooday 2005-tii isaga oo 77 jir ah. Wuxuuna noqday dambiilihi ugu dambeeyey oo isku dayay inuu in mudda ah isqariyo si uu uga badbaado xabsi dheer oo uu muteysan lahaa.
Sheekada 'aabbaha khiyaanada' oo soddomeeya sano lagu radjoogay waxay ku soo afjarantay sharciga oo mudankiisa mariyey.